डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले खुलेर भनेका छन्– म राजाबादी होईन, तर महेन्द्रको राष्ट्रवाद मलाई मन पर्छ । डा. उपेन्द्र देवकोटा, बरिष्ठ न्यूरोसर्जन, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री । डाक्टर भएर पनि जुनसुकै राष्ट्रवादी कार्यक्रममा जाने र देशको चिन्ता गर्ने गर्छन् । देशको चिन्ता गर्ने व्यक्ति प्रतिगामी हुनसक्छ ? ठूला पार्टीहरु सबैलाई झोले बनाउन खोजिरहेका छन् र देशको चिन्ता र चिन्तन गर्नेहरुलाई दरवारवादी, प्रतिगामी, पश्चगमनकारी भनेर डाम्ने गरेका छन् ।
यी डाक्टरको स्पष्ट भनाई छ– यो राष्ट्रियता नै खल्बल्याउने गरी गरिएको सत्ता परिवर्तन हो । जो खतरनाक मात्रै होईन, घातक पनि छ । सत्ता गठबन्धन जसरी चलिरहेको छ, त्यो गलत छ । यतिमात्र होइन, सम्पूर्ण गणतान्त्रिक परिवर्तनहरु समेत जनभावना र कानुनसम्मत छैनन् । मुलुक राजनीतिक रुपमा स्किजोफे्रनिक मात्रै होईन, मेगालोमेनियाग्रस्त भएको उनले डायग्नोसिस् समेत गरेका छन् । राष्ट्रलाई यस्तो हालतमा पु¥याएका राजनीतिक दलहरुले हुन्, उनीहरुले यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ ।
अहिलेको शासन प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै डा.उपेन्द्र देवकोटाले भनेका छन्– नेपालमा अन्य ब्यवस्थाहरु तुहिए जस्तै गणतन्त्र पनि तुहिनेछ । नेपाल जस्तो देशमा भारतीय संविधानको फोटोकपी लादेर नेताहरुले गर्न खोजेको काम जनताको सर्वोपरी हित बिपरित छ । घातक पनि छ । देशको अस्थिर राजनीति, मौलाइरहेको भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, कालोबजारी जस्ता कुराले देश खोक्रिसकेको उनको निष्कर्ष छ । नेताहरु मुलुकका यस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई समाधान गर्न छाडेर सत्ताको भागबण्डा लागेकाले देशमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ ।
देशको चिन्ता गर्नेलाई प्रतिगामी भनेर डाम्नेहरुले बुझ्नैपर्छ– आज पनि महेन्द्रले खनेको विकासको, राष्ट्रिय अस्तित्वको मार्गचित्र च्यातेर अग्रगमन हुनसक्दैन । राष्ट्रलाई कहा“ पु¥याउने, कसरी पु¥याउने, सपना के हो, प्रतिवद्धता के हो ? यसको जानकारी आमनागरिकले पाउनुपर्छ । विदेशीको बुई चढेर स्वदेशको सपना साकार हुन्न, स्वाभिमान बच्दैन, स्वाधीनताको रक्षा पनि हुनसक्दैन । अहिले जे देखिएको छ, ती सबै दृश्यहरु विदेशमुखी छन्, स्वदेशमुखी छैनन् । हामी स्वदेशमुखी हुन नसक्ने अनि महेन्द्रको राष्ट्रवादको प्रशंसा गर्नेलाई प्रतिगामी भन्नु नितान्त गलत मान्छौं र महेन्द्रभन्दा राष्ट्रवादी बनेर देखाउन नेताहरुलाई आग्रहसमेत गर्छौं ।